सेवाग्राहीलाई टेलिकमबाट ब्यालेन्स लोन » खबरहरुको एउटै केन्द्र
सेवाग्राहीलाई टेलिकमबाट ब्यालेन्स लोन
मंगलवार, चैत्र १५, २०७३ १३:११ मा प्रकाशित !
१५ चैत, काठमाडौँ। नेपाल टेलिकमले जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेड मोबाइल सेवाका सेवाग्राहीलाई ‘ब्यालेन्स’ नहँुदा ‘कल’ गर्न ‘लोन’ रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
टेलिकम र हङकङस्थित टियक्साको लोकल एजेन्ट हेमन्त ट्रेड सेन्टर प्रालिबीच यही चैत ६ गते सोबारे सम्झौता भई आज सार्वजनिक गरिएको टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिए । सम्झौतानुसार उपभोक्तालाई कम्पनीको जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेड मोबाइलबाट कुरा गर्दागर्दै सकिएको ब्यालेन्समा लोन रकम उपलब्ध हुनेछ ।
PREVIOUS POST Previous post: भोलि प्रधानमन्त्री ल्हासाबाट स्वदेश फर्कंदै
NEXT POST Next post: आर आर क्याम्पसमा अनेरास्ववियूको प्यानल निर्वाचित
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, चैत्र १५, २०७३ १३:११
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, चैत्र १५, २०७३ १३:११
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, चैत्र १५, २०७३ १३:११
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, चैत्र १५, २०७३ १३:११
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, चैत्र १५, २०७३ १३:११